पुस्तकालयको लडाईंमा पिथौरागढ : नेपालका विद्यार्थीलाई टिप्स - Jhilko
पुस्तकालयको लडाईंमा पिथौरागढ : नेपालका विद्यार्थीलाई टिप्स
पुस्तकालयमा पुस्तक नभएको, स्कूल कलेजमा शिक्षक नभएको विषयमा आजभोलि विद्यार्थीले आन्दोलन गरेको विरलै सुनिन्छ । तर दूरदराजमा यस्ता नैतिक विद्यार्थी रहेछन् भन्ने सुन्न पाउँदा मात्र पनि यो समाज भड्खालोमा नगइसकेकोे हेक्कासम्म हुन्छ । सरकार त चेतनहीन जनता भए शासन गर्न सहज ठान्छ । यस्ता सरकारलाई आन्दोलनमार्फत झक्झक्याउने काम विद्यार्थीले गर्नुपर्छ । यस्तै काम भारत उत्तराखण्ड प्रदेश अन्तर्गत पिथौरागढका विद्यार्थीले गरेका छन् ।
नेपालको पश्चिम महाकाली अञ्चल र चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्ला हो पिथौरागढ । पिथौरागढमा एकमात्र उच्च शैक्षिक संस्था छ । लक्ष्मणसिंह मेहरा राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय नाम गरेको यो विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु यतिखेर पुस्तकालयमा पुस्तक र कलेजमा शिक्षक हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित छन् । भारतीय लोकसभा निर्वाचनकै क्रममा १७ जुन २०१९ देखि आन्दोलित विद्यार्थीको माग आजसम्म पूरा भएको छैन ।
शैक्षिक शहीद एउटा अनौठो घटना नै मान्नु पर्छ । पिथौरागढमा विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने मागसहित सन् १९७० मा आन्दोलन भएको थियो । यो आन्दोलन दवाउन तत्कालीन भारत सरकारले ठूलो प्रहरी दमन ग¥यो । त्यसैक्रममा सज्जनसिंह शाह र शोभसिंह नेपालीले शहादत प्राप्त गरे । यही आन्दोलनको फलस्वरुप सन् १९७३ मा पिथौरागढमा सरकार विश्विद्यालय स्थापना गर्न वाध्य भयो ।
अहिले यही विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पुस्तकालयमा पुस्तक र कलेजमा शिक्षक पर्याप्त नभएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा चान्सलर, रजिष्टार नभएको त वर्षाैं वितिसकेको छ । सन् ७० को दशकमा राखिएको पुस्तकवाहेक नयाँ पुस्तक त्यो विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा नभएकोमा विद्यार्थीको असन्तुष्टि हो । तर, भारत सरकारले यही गौण माग पनि पूरा गर्ने छाँट देखाएको छैन ।
भारतमा पुस्तकालय :
भारत एक अरव बढी जनसंख्या भएको मुलुक हो । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतका ६ लाख गाउँहरुमा करिव ७० हजार पब्लिक पुस्तकालय रहेको अभिलेख छ । यसरी नै भारतका शहरहरुमा करिव ५ हजार पब्लिक पुस्तकालयहरु छन् ।
भारतको शैक्षिक उन्नतिका लागि यस्तो व्यवस्थालाई पिछडिएको अर्थमा लिन सकिन्छ । विकसित देशहरुको पहिचान पुस्तकालयको व्यवस्थाबाट थाहा हुन्छ । अमेरिकामा ९५ प्रतिशत जनतामा पुस्तकालयको पहुँच छ । अमेरिकामा प्रतिव्यक्ति ३६ डलर पुस्तकालयमा नागरिक पहुँचको लागि खर्च गरिन्छ । भारतमा प्रतिव्यक्ति पुस्तकालय खर्च भारु ७ पैसामात्र छुट्याइएको छ । भारतले यसै वर्षदेखि विदेशवाट पुस्तकको आयातमा ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ ।
पुस्तकालय के हो ?
पुस्तकालय ज्ञानको ढुकुटी हो । सचेत, वौद्धिक, विवेकशील नागरिक निर्माण गर्ने कारखाना हो । अमेरिकी लेखक नम्र्यान कजिनका अनुसार ‘पुस्तकालय विचार प्रजनन’ गर्ने केन्द्र हो ।
नेपालमा पनि केशर महललगायत, विश्वविद्यालयका र अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयहरु छन् । तर, ती कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् ? हालै नेपालले विदेशवाट आयात गरिने पुस्तकमा भन्सार शुल्क लगाएको छ । ज्ञानको आर्जन गर्ने पुस्तकमा भन्सार शुल्क लगाउनु उचित हो ? कि भारतकै सिको गरेको हो नेपालले ? नेपालका विद्यार्थीहरुले पुस्तकालयमा पुस्तक नभएको, स्कूल कलेजमा शिक्षकको अभावमा अध्ययनअध्यापन नभएको भनेर मागमुद्धा तेस्र्याएको कतै सुन्नु भएको छ ? विकास र समृद्धिको नाराभित्र कतै पुस्तकालयको विकास पनि पर्छ ? प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।
प्रहरी सहायक निरीक्षक विरुद्ध घूस मुद्दा
सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने सय सेलिब्रेटीहरूमा एक्ला भारतीय अक्षय कुमार
इञ्जिनीयरकै प्रमाणपत्र नक्कली !
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानमा इञ्जिनीयरकै शैक्षिक योग्यताको...
मार्सी धान जोगाउन यसो गरिँदै
श्वमै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा फल्ने मार्सी धान जोगाउनका लागि डिपिआर तयार गर्न थालिएको...
काभ्रेमा ५० भारतीय नागरिक नियन्त्रणमा
सिन्धुपाल्चोकबाट बिहान ८ बजे धुलिखेल आएका ती भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको...
व्यंग्यः घुस लिन्या, घुस दिन्या र फासफुस पान्र्या
एकाध रोपनी, आना वा एकाध बिघा, कट्ठा, धुर जग्गा जमिन जोगाड गर्न त कस्तो दुःख हुन्छ...